AJỤJỤ A NA -AJỤKARỊ
Ọnụ ahịa anyị nwere ike ịgbanwe dabere na ọkọnọ na ihe ahịa ndị ọzọ. Anyị ga -ezitere gị ndepụta ọnụahịa emelitere mgbe ụlọ ọrụ gị kpọtụrụ anyị maka ozi ndị ọzọ.
Ị nwere opekata mpe ịtụ ahịa?
Ee, anyị na -achọ iwu mba niile ka ha nwee ọnụ ọgụgụ kacha nta na -aga n'ihu. Ọ bụrụ na ị na -achọ ịre ahịa mana n'ọtụtụ pere mpe, anyị na -akwado ka ị lelee weebụsaịtị anyị
Ị nwere ike ịnye akwụkwọ dị mkpa?
Ee, anyị nwere ike ịnye ọtụtụ akwụkwọ gụnyere Asambodo nyocha / mmezi; Insurance; Mmalite, na akwụkwọ mbupụ ndị ọzọ ebe achọrọ.
Gịnị bụ nkezi oge ndu?
Maka nlele, oge oge ihe dị ka ụbọchị 7. Maka imepụta oke, oge izizi bụ ụbọchị 20-30 mgbe ị nwetasịrị nkwụnye ego. Oge ndị isi na -adị irè mgbe (1) anyị natara nkwụnye ego gị, yana (2) anyị nwere nkwenye ikpeazụ maka ngwaahịa gị. Ọ bụrụ na oge iduzi anyị anaghị arụ ọrụ na oge ngwụcha gị, biko jiri ire gị gafee ihe ndị ị chọrọ. N'ọnọdụ niile, anyị ga -anwa ịnabata mkpa gị. N'ọtụtụ ọnọdụ anyị na -enwe ike ime ya.
Kedu ụdị usoro ịkwụ ụgwọ ị nabatara?
Nkwụnye ego 30% tupu oge eruo, 70% itule megide nnomi nke B/L.
Anyị na -ekwe nkwa ihe na ịrụ ọrụ anyị. Nkwa anyị bụ ka afọ ju gị na ngwaahịa anyị. Na akwụkwọ ikike ma ọ bụ na ọ bụghị, ọ bụ ọdịbendị nke ụlọ ọrụ anyị iji lebara ma dozie nsogbu ndị ahịa niile ka afọ ju onye ọ bụla
Ị na -ekwe nkwa nnyefe ngwaahịa echekwara na nchekwa?
Ee, anyị na -eji nkwakọ ngwaahịa mbupụ dị elu mgbe niile. Anyị na -ejikwa ngwungwu ihe egwu pụrụ iche maka ngwongwo dị ize ndụ yana ndị na -ebubata nchekwa oyi dị mma maka ihe ndị nwere mmetụta okpomọkụ. Nkwakọ ngwaahịa ọpụrụiche na ihe achọrọ maka nkwakọ ngwaahịa nwere ike bute ụgwọ ọzọ.
Ọnụ ego mbupu na -adabere n'ụzọ ị họọrọ iji nweta ngwongwo. Express bụkarị ụzọ kachasị ọsọ mana ọ dịkwa oke ọnụ. Site na oke osimiri bụ ihe kacha mma maka nnukwu ego. Kpọmkwem ọnụego ibu anyị nwere ike inye gị ma ọ bụrụ na anyị maara nkọwa nke ego, ibu na ụzọ. Biko kpọtụrụ anyị maka ozi ndị ọzọ.